Saxaabiyaat – Wajibad
Ramla Bintu Abii Sufyaan: رملة بنت أبي سفيان
Ramla Bintu Abii Sufyaan |رملة بنت أبي سفيان
Haweenka Saxaabiyaadka: Ee Suubanaha Rasuulka (Caleyhi Salaatu wa-Salaam)
Ummu Xabiiba Ramla Bintu Abii Sufyaan: Allah iyo Rasuulkiisa ayey ka dooratay waxa kasoo haray oo idil”
Ma jirin Qof ka mid ah Qureysh oo aaminsanaa ama rumeysanaa inuu khilaafi karay ama diidi karay amarka iyo talada uu soo jeediyo Abuu Sufyaan oo ka mid ahaa madaxda iyo ugaasyada Quraysh. Hase ahaatee, waxaa si dhiiranaan iyo kalsooni weyn ku jirta gaashaanka ugu dhufatay amarkii Sufyaan gabadhiisii uu dhalay ee lagu magacaabayay Ramla Bintu Abii Sufyaan, kadib markay iyada iyo ninkeedii Cubeydillaahi Binu Jaxshi ay ku soo biireen diinta xaqa ah ee islaamka, ayna ku kufriyeen Illaahyadii ay caabudayeen aabayaashoodii iyo guud ahaan qureysh.
Haddaba, gabadhii sida weyn ugu qanacday diinta ay soo gashay ee islaamka iyo ninkeeda Cubeydillaahi Binu Jaxsh iyo gabadhoodii yarayd ee Xabiiba waxay ka mid ahaayeen muslimiintii ka qaybgalay hijradii 2-aad ee Xabasha. Xiriirkii qureysh iyo boqorka Najaashi Muslimiintii waxay si weyn u caddeeyeen dhambaalka uu islaamka xanbaarsan yahay, waxayna boqorka maqashiiyeen qaar ka mid ah aayadaha quraanka.
“Diinta lagu soo dejiyay Nebigiina Muxammad (scw) iyo diinta lagu soo diray Nebi Ciise (cs) waxay ka yimaadeen hal meel” Boqor Najaashii ka hor intii uusan islaamin.
Boqorkii Najaashiga wuxuu ciidamadiisa iyo dowladdiisaba amar ku siiyay in la magangaliyo muslimiintii xaggiisa u soo haajiray, inkastoo ay jirtay qaar ka mid ah hoggaamiyayaashiisii isaga hoos imaanayay ay ka biyo diideen inay soo islaameen. Diintoodii kirishtaanka ayay ku sii sugnaadeen. Ramla Bintu Abuu Sufyaan waxay sii joogtay dhulka Xabasha, iyadoo aad iyo aad ugu faraxday nabadgelyada iyo magangalyada ay ka heshay iyada iyo muslimiinta kaleba boqorka Najaashi. Hase ahaatee, iyadoo taasi ay jirtay, haddana wuxuu Allaah (sw) doonay inuu Ummu Xabiiba ama Ramla uu mariyo imtixaan aad u daran, imtixaankaasoo kale oo ay ragga intooda badan ku dhacaan.
Allaahu akbar, Ummu Xabiiba waxay ugu danbeyntii qaadatay go’aankeedii geesinimada badnaa, waxayna doorbidday inuu Cubeydillaahi Binu Jaxsh uu furo, maadaama uu riddoobay oo uu ka laabtay islaamka. Ummu Xabiiba Ramla Bintu Abii Sufyaan markii ay ka ciddo baxday Cubeydillaahi waxaa soo gaaray warkii nolosheedii ugu farxad badnaa ee ay maqashay intay dunida saarnayd. Waxaa soo doonay Rasuulka (scw) “Boqorka ayaan salaan kaaga wadaa, wuxuuna ku leeyahay Nebi Muxammad (scw) ayaa ku soo doonay oo doonaya inuu ku guursado,…” Abraha oo ka mid ahayd shaqaalihii boqorka Najaashi.
Goor subax barqin ah ayaa Ummu Xabiiba oo ku sugan gurigii ku noolayd albaabkiisa la soo garaacay. Markay furtay albaabkii waaba Abraha oo ka mid ahayd shaqaalihii boqorka Najaashi. Abraha waxay si naxariis iyo ixtiraam ku dheehan tahay u salaantay Ummu Xabiiba, dabadeedna waxay ku tiri “Boqorka ayaan salaan kaaga wadaa, wuxuuna ku leeyahay Nebi Muxammad (scw) ayaa ku soo doonay oo doonaya inuu ku guursado, wuxuuna soo diray waraaq uu boqorka wakiilanayo si uu kuu mehersado, ee qofkaad doontid u wakiilo walaayadaada…”.
Ummu Xabiiba waxay farxad awgeed garan weysay meeshay joogtay, waxayna iyadoo aanan is ogeyn ku tiri gabadhii ula timid khabarkaan farxadda leh “Allaha kugu bishaareeyo kheyr.., Allaha kugu bishaareeyo kheyr”, waxayna markiiba billowday inay u siibto qaar ka mid ah dharkii quruxsanaa ee ay qabtay iyo jijimadii ay xirnayd iyadoo siisay gabadhii Abraha, iyadoo sidaas abaalmarin uga dhigaysa. Ummu Xabiiba, maalintaas waxay u ahayd maalin aynan weligeed hilmaamin, hantideedii ugu jeclayd ayay gabadhii Abraha si farxad leh damacday inay siiso, waxaana hubaal ah hadday heesan lahayd hanti ka badan intaas inay siin lahayd. Ummu Xabiiba waxay nasiib u yeelatay inuu soo doono inta uu Allaah abuuray kii ugu sharafta iyo fadliga badnaa, waa Nebigeena Muxammad (scw). Waa hubaal inay dumarka intooda kale ay dheer tahay fadligaas iyo wanaagaas. Waxay wakiilatay saxaabiga lagu magacaabo Khaalid Binu Saciid Bin Al-Caas oo muhaajiriintii markaas Xabasha ku sugnaa ugu dhowaaanshaha badnaa xagga qaraabada.
Arooskii Rasuulka (scw) oo ka dhacay Geeska Afrika…..!
Arooskii ama nikaaxii Rasuulka (scw) ee Ummu Xabiiba wuxuu ka dhacay guriga boqortooyada Najaashi.
Inkastoo ay lacagtii dahabka ay wax ka siisay, laakiin waxyar markay maqnayd way ku soo noqotay iyadoo wadda lacagta, waxayna ku tiri “boqorka wuxuu ballan ku qaaday inaanan waxna kaa qaadan”, sidoo kale wuxuu haweenkiisa amar ku siiyay inay mid waliba haddiyad kuu keenaan. Subixii markii la gaaray, haween kasta waxay awoodday oo haddiyad ah ayay la timid.
Abraha oo ahayd gabadhii Ummu Xabiiba u keentay khabarkii la xiriiray inuu Rasuulka (scw) doonayo inuu guursado Ummu Xabiiba ayaa waxay u timid Ummu Xabiiba, waxayna ku tiri “waxaan doonayaa inaan arrin kuu sheego”.. Ummu Xabiiba ayaa u celisay “oo maxay arrintaasi tahay??” Abraha: “waan islaamay, oo waxaan raacay diinta Muxammad (scw) ee fadlan iga gaarsii Nebiga salaan, una sheeg inaan rumeeyay Allaah (sw) iyo Rasuulkiisa”, waxayna misna intaas raacisay “marnaba ha iga hilmaamin salaantaas”.
”Ummu Xabiiba waxay tiri, Abraha waxay ii diyaarisay gaadiidkii aan ku safri lahaa, sidiina ayaan ugu safray magaalladii Madiina ee uu degganaa Rasuulka (scw).”
Ummu Xabiiba waxay tiri, Abraha waxay ii diyaarisay gaadiidkii aan ku safri lahaa, sidiina ayaan ugu safray magaalladii Madiina ee uu degganaa Rasuulka (scw). Markii ugu horeysay ee aan la kulmay Rasuulka (scw) waxaan uga waramay sidii ay u dhacday doonistii iyo arooskiiba, iyo wixii aan ku wada hadalnay ama na dhexmaray anniga iyo Abraha, waana u sheegay inay soo salaamaysay. Rasuulka (scw) aad iyo aad ayuu ugu farxay warkii aan uga sheegay Abraha, wuxuuna yiri “iyadana dusheeda Allaha gaarsiiyo nabadgelyadiisa, naxariistiisa iyo barakaatkiisa.
Welina Aan Caqli Doorsoomin. Continue reading “Asmaa Bintu Abii-Bakar: أسماء بنت أبي بكر” →
Ummu Salama: أم سلمة
Ummu Salama |أم سلمة
Haweenka Saxaabiyaatka: Suubanaha Rasuulka (Caleyhi Salaatu-wa-Salaaam)
Hindi bintu Abii Umayya ”Ummu Salama”
Islaamidda ay soo islaameen Ummu Salama iyo ninkeeda Cabdullahi ayaa gaaray gaaladii Qureysh., sidii marka horeba laga filayay Qureysh waxay bilaabeen inay jir dil daran ku sameeyaan Ummu Salama iyo ninkeeda, hase ahaatee ma aynan tabar daraynin oo ma daciifin arrinkaa iimaankoodi. Balse, waxay ka sii siyaadsadeen ku kalsoonaan iyo rumeyn ay rumeyaan Eebe (sw).
Dhibaatadii Qureysh ay ku hayeen Saxaabada Rasuulka (scw) markay badatay, ayaa Rasuulka (scw) wuxuu u ogolaaday Asxaabta inay u haajiraan oo u cararaan dhulka Xabashida. Ummu Salama iyo ninkeeda waxay ka mid ahaayeen kuwii ugu horeeyay ee u haajira dhulka Xabashida.
Ummu Salama mar kale waxay go’aansatay inay ka mid noqoto dadka u hijroonaya Madiina, kuwaasoo la cararaya diintooda iyo inay ka badbaadaan dhibaatooyinka qureysh. Hijradan danbe ma ahayn mid sahlan, sida hijradii hore ee ay ugu haajirtay dhulka Xabashida, waayoo waxay ahayd mid aad u dhib badan oo aan saUmmu Salama waxay tiri, markuu ninkayga Abuu Salama go’aan ku gaaray in aan u safarno Magaalada Madiina, ayaa wuxuu ii raray oo uu iidiyaariyay awr, dabadeedna wuxuu i saaray awrtii.
Wiilkeenii Salama oo nala socdayna wuxuu fariisiyay dhabtayda. Intaa ka dib, Abuu Salama wuxuu nagu kaxeeyay awrtii, isagoo aan istaagaynin meelna. Ummu Salama waxay tiri, ka hor inta aanan ka bixin magaalada Makka ayaa waxaa na arkay rag ka mid ah qaraabadeyda (reer Banuu Makhzuum), isla markiiba xaggeena ayeey soo aadeen, iyagoo ku yiri ninkeyga Abuu Salama “Haddii aad adiga naga baxsatay, sideey nooga baxsanaysaa gabadha kula socoto. Waa gabadheenna, sideen kuugu ogolaanaynaa inaad la tagto oo la baxsato”.
Intaa ka dib, raggii waxay ku soo boodeen Abuu Salama, dabadeedna way iga soo jiiteen ninkeeyga Abuu Salama. Ummu Salama waxay tiri, markii nimankii ay iga soo wateen ninkayga anniga iyo wiilkayga Salama ayaa waxaa na arkay niman reer Banuu Cabdil-Asad oo ay qaraabo yihiin ninkeeyga. Aad ayeey uga caroodeen wixii nalagu sameeyay, oo waxay nimankii ku yiraahdeen raggii kale ee reer Banuu Makhzuum:
“Wallaahi qaadan maysaan wiilka, waayoo waa wiilkannaga, innagaana xaq u leh inaan qaadanno” Sidaa dabadeed waxay labadii kooxood bilaabeen inay jiitaan wiilka Salama iyadoo ay arkayso Ummu Salama ilaa ay qaataan reer Banii Cabdil-Asadi.
Aad ayeey arrinkaa ugu faraxday Ummu Salama, hase ahaatee su’aasha ay is weydiisay Ummu Salama ayaa ahaa sidii ay ku haleeli lahayd ninkeeda Abuu Salama oo markaa joogay magaalada Madiina. Dhinaca kale, taas waxaa ka sii darnayd iyadoo aan ka tagi karin wiilkeeda Salama oo ay heestaan Reer Banii Cabdil-Asadi oo ah reeraha Abuu Salama.
Ummu Salama waxay iyada iyo wiilkeed u safreen magaalada Madiina, iyadoo mareysa meel la yiraahdo “Tanciim” ayaa waxaa la kulmay nin la yiraahdo Cusmaan binu Dhalxa. Ninkii wuxuu Ummu Salama weydiiyay halka ay u socoto, waxayna tiri magaalada Madiina. Wuxuu haddana weydiiyay cidda ay la socoto. Ummu Salama waxay ku jawaabtay wallaahi waxaan ahay anniga iyo wiilkayga Salama oo keliya.
Haddaba, Cusmaan ayaa yiri wallaahi kaa tegi maayo ilaa aan ku geeyo magaalada Madiina, sidaasna ayuu sameeyay. Ummu Salama iyo wiilkeedii Salam waxay yimaadeen magaalada Madiina, halkaas oo ay la kulmeen Abuu Salama oo ayan is arag in Muddo ah. Ummu Salama aad ayeey ugu faraxday la kulanka ninkeeda Abuu Salama. Wax yar maba la joogin ilaa ay ka billowdaan dagaaladii Badar iyo Uxud.
Ummu Salam ninkeeda Abuu Salam wuxuu ka qayb galay labadaas duulimaad, nasiib darrose wuxuu ku dhaawacmay dagaalkii danbe ee Uxud, ka dib markii uu wacdaro daran halkaa ku soo bandhigay. Wixii intaa ka danbeeyay Abuu Salama wuxuu saarnaa sariirta halkaas oo lagu daaweenayay. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa Abuu Salam soo booqday Rasuulka (scw), markii uu Rasuulka (scw) ka tagayna maba sii noolaan Abuu Salama oo wuu geeriyooday.
Ummu Salama waxay Illaah ka bariday in uu Illaah u sahlo nin ka kheyr badan Abuu Salama, laakiin waxay gadaal danbe is weydiisay su’aasha ah, yaa noqon kara ninka ka kheyr badan Abuu Salama. Hase ahaatee, Illaah wuu aqbalay ducadeedii, oo waxay heshay Ummu Salama nin ka kheyr badan Abuu Salama waana Rasuulka (scw). Waxaa Ummu Salama maalintaa wixii ka danbeeyay guursaday Rasuulka (scw). Sidaasna ayeey waxay ku noqotay mid ka mid ah hooyooyinka Muslimiinta, waayoo xaasaka Rasuulka waa hooyooyinka muslimiinta.